Stripe vs Square: Kadinkee Lacag-bixinta ah ee ay tahay inaad isticmaasho 2021? | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Stripe vs Square: Kadinkee Lacag-bixinta ah ee ay tahay inaad isticmaasho 2021?
Stripe vs Square: Kadinkee Lacag-bixinta ah ee ay tahay inaad isticmaasho 2021?
0 Daqiiqado 13 ayaa akhriyay
Ciyaartoyda ugu sarreeya warshadaha albaabka lacag bixinta ayaa had iyo jeer horumaraya si ay u noqdaan lambarka koowaad. Ka dib oo dhan, waxaa jira milkiilayaasha dukaamada ecommerce in ka badan maalmahan, dhammaantoodna waxay u baahan yihiin hab la isku halayn karo oo ay uga ururiyaan lacagaha macaamiisha.
Laba ka mid ah ikhtiyaarrada albaabka lacag bixinta ee ugu wanaagsan ee maanta suuqa ka jira waa Xarig iyo Square. Labaduba waxay bixiyaan ganacsiyo siyaabo sahlan oo lagu socodsiiyo lacagaha lagu bixiyo khadka, tignoolajiyada hormuudka u ah, iyo agabyo badan oo ecommerce ah si ay wax ugu fududeeyaan milkiilayaasha dukaamada ecommerce ee isku dayaya inay ganacsi sameeyaan oo ay lacag sameeyaan.
Stripe vs Square: sidee ayay u kala duwan yihiin?
Stripe iyo Square waxay leeyihiin astaamo u gaar ah oo loogu talagalay inay u adeegaan baahiyo aad u kala duwan. Run ahaantiina, tani waxay go'aamin kartaa albaabka lacag bixinta si aad u isticmaasho si ka sii adag inta aad rabto. Taasi waa sababta aan u ordi doonno a Stripe vs Square marka la barbardhigo, si aad u samayn karto go'aan ku salaysan xogta ganacsigaaga yar.
Diyaar ma u tahay? Bal aan eegno.
Stripe vs Square: Maxay qabtaan?
Stripe waxaa la aasaasay 2011 waana albaab lacag-bixineed kaas oo kuu ogolaanaya inaad aqbasho lacagaha kaararka deyntaqof ahaan ama online) adiga oo lacagta u kala wareejinaya akoonkaaga baayacmushtarka iyo processor-ka lacag bixinta. Tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo terminalka kaadhka deynta jirka ama processor-ka onlineka ah.
Weli fikradan ma u aragtaa mid wareersan? Waa kuwan muuqaal muuqaal ah oo kaa caawinaya:
Habka albaabka lacag bixinta (Isha sawirka: Orioly)
Stripe waxay leedahay kaabayaal ku salaysan daruuraha oo loogu talagalay isku halaynta, miisaanka, iyo amniga. Ma aha in la xuso, waa horumariye udub dhexaad u ah, waxay u shaqeysaa mareegaha ganacsiga iyo codsiyada, waxayna ku qotontaa koodka iyo naqshadeynta labadaba.
Intaa waxaa dheer, Stripe waxaa loo isticmaali karaa sidii xal gooni ah oo loogu talagalay kuwa u baahan inay soo diraan qaansheegyada oo ay u ururiyaan lacagaha alaabada ama adeegyada. In kasta oo tani aysan ahayn habka ugu badan ee loo isticmaalo Stripe, maadaama dadka intooda badan ay ku biiraan bogagga ecommerce, waa hab kale oo loo isticmaalo albaabkan lacag bixinta dabacsan oo xoogga badan.
Sida laga soo xigtay Datanyze, Stripe ayaa ka kooban 15.39% saamiga suuqaStripe vs PayPal had iyo jeer waxay u halgamayaan booska koowaad):
Wadaagga Suuqa Stripe (Isha sawirka: Datanyze)
Si aad fikrad ku siiso sida Stripe uu u awood badan yahay, ogow tan: shirkadaha tafaariiqda sida Lyft, Amazon, iyo Microsoft waxay isticmaalaan Stripe. Ka hadalka shirkadaha, Behmaster Isticmaalka Stripe sidoo kale.
Square, dhanka kale, waa xoogaa da' weyn (aasaasay 2009) oo aan farsamo ahaan ahayn albaab lacag bixineed. Dhab ahaantii, waa wax badan oo ah processor-ka lacag bixinta dhamaadka-ilaa-dhamaadka ama terminalka farsamada. Intaa waxaa dheer, si ka duwan Stripe, oo loo isticmaali karo madal kasta oo ku habboon, Square ma aha xalka albaabka lacag bixinta ee goonida ah. Taa beddelkeeda, waxay ku timaaddaa qayb ka mid ah xallinta ecommerce-ka weyn.
Software-kani aad buu u wanagsan yahay sababtoo ah wuxuu asal ahaan u rogayaa aaladaha macaamiishaada marinnada iibka ee la qaadi karo. Sababtan awgeed, waxaad inta badan ogaan doontaa in Square's sheyga uu dhab ahaantii yahay nidaamkooda POS ee shakhsi ahaaneed. Waxay siisaa baayacmushtarka hab ay ku ururiyaan lacagaha macaamiisha iyagoo akhrinaya kaararka deynta iyagoo isticmaalaya qalab smart ama iyagoo gacanta ku galaya macluumaadka kaararka deynta (qof ahaan ama telefoon ahaan).
Taasi waxay tidhi, sanadihii la soo dhaafay Square ayaa kor u kacday si ay ula tartanto shirkadaha si fiican loo aasaasay sida Stripe. Dhab ahaantii, waxaad hadda isticmaali kartaa Square si aad si fudud uga soo ururiso lacagaha macaamiisha wax ka iibsanaya dukaanka onlineka ah.
Stripe vs Square: Diyaarinta (fudud isticmaalka)
Dejinta khibrada lacag bixinta Stripe ee shabakadaada waxay u dhexeysaa mid aad u fudud ilaa aad u adag, iyadoo ku xidhan inaad u baahan tahay albaabkaga lacag bixinta si aad u sameyso. Oo tani waxay dhacdaa inay noqoto mid ka mid ah dhibcaha iibinta Stripe.
Diirada-saar-xuddunka horumariyaha ayaa ku siinaysa dabacsanaan si aad u abuurto nidaam hubineed oo macaamiisha ah. Qalabka Stripe Elements, waxaad dammaanad qaadaysaa macaamiishaada inay si dhakhso leh oo sax ah u geliyaan macluumaadkooda iyada oo ay ugu wacan tahay ansaxinta wakhtiga-dhabta ah, meelaynta firfircoon, shaqaynta buuxinta, iyo qaabaynta iyo waji-xidhka oo la hagaajiyay.
Si ka sii wanaagsan, Elements Stripe waxay meesha ka saaraysaa baahida bogga lacag bixinta ee la marti galiyay ee boggaaga. Taa beddelkeeda, kaliya samee foomkaaga hubinta ama ku dar badhanka ku-deeqidda Stripe goobtaada si aad lacag uga ururiso dadka si fudud.
Maareynta lacagaha lagu bixiyo goobtaada ecommerce sidoo kale waa sahlan tahay markaad isticmaasho Stripe sababtoo ah dashboardkeeda dareenka leh:
Si dhakhso leh u hel dhaqdhaqaaqa goobta, hubi jaantusyada waqtiga-dhabta ah, oo xitaa arag haddii ay jiraan wax ficil ah oo aad u baahan tahay, sida khilaafyada aan laga jawaabin ama aqoonso xaqiijinta (taas oo ku haboon yaraynta khayaanada kaararka deynta).
Dhinaca kale, oo leh Square wax walba waxay udub dhexaad u yihiin fududaynta. Dhammaan software-ka aad u baahan tahay si aad u aqbasho lacag-bixinta oo aad u maamusho ganacsigaaga waxay ku jiraan hal nidaam oo dhexe. Dhab ahaantii, waxaad geli kartaa agabka warbixineed ee horumarsan, maamuli karta kaadhadhka wakhtiga, iyo xataa waxaad samayn kartaa olole suuqgeyneed toos ah dashboardka akoonkaaga Square:
dashboard laba jibaaran
Oo ilaa hadda sida dejinta Square, waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo kala duwan. Si aad u bilowdo, waxaad gooyn kartaa oo dhejin kartaa qayb kood ah (sida Stripe) oo u samee ikhtiyaar hubinta macaamiisha isla markaaba mareegahaaga. Ama, waxaad isticmaali kartaa plugin sida WooCommerce Square si aad u kordhiso goobtaada ecommerce oo aad aqbasho lacag bixinta.
Laakiin laga yaabaa in xalka ugu fudud waa inaad dhisto dukaankaaga Weebly.
Bishii Abriil ee 2018, Square waxay heshay madal ecommerce Weebly oo waxay ku biirisay kadinkeeda lacag bixinta si sax ah ma jirto si loo habeeyo wax mar haddii goobtaada Weebly ay shaqeyso oo ay socoto. Si ka duwan website-ka WordPress-ka ah ee is-martigeliyay, Weebly si buuxda ayaa loo martigeliyay si aadan waligaa uga welwelin inaad hesho bixiyaha martigelinta websaydhka saxda ah ee goobtaada.
Isku soo wada duuboo, Square waa xal fudud oo omnichannel ah oo loogu talagalay ganacsatada doonaya inay meel kasta ku iibiyaan iyaga oo aan la tacaalin kood adag ama farabadan is dhexgalka dhinac saddexaad.
Stripe vs Square: Khidmadaha wax kala iibsiga iyo kharashyada dejinta
Qiimaha isticmaalka Stripe waa mid toos ah. Waa goob lacag-bixineed oo ma jiraan wax khidmad ah oo isdiiwaangelin ah, taasoo ka dhigaysa ikhtiyaar la awoodi karo ganacsiyada nooc kasta leh.
Halkan waxaa ah muuqaal degdeg ah oo ku saabsan khidmadaha wax kala iibsiga ee Stripe:
Ganacsiga aasaasiga ah: 2.9% wax kala iibsiga + $0.30.
Ganacsiga Caalamiga ah: 3.9% ganacsigiikharashka beddelka ayaa laga yaabaa in lagu dabaqo).
Ganacsiyo waaweyn: laga dhimay 0.8% ganacsigiiba (ku koobnayd $5 - hababka lacag bixinta waxaa ka mid ah ACH debit toos ah, credit ACH, iyo wareejinta siliga).
Dib-u-celin kasta, Stripe waxay kugu dallici doontaa $15, haddii aan dib-u-soo-celinta la go'aansanin adiga. Tani waa mid aad u tartan badan marka la barbar dhigo albaabada kale ee lacag bixinta, marka laga reebo Square.
Si la mid ah Stripe, Square kuma dalaco wax kharashaad is-diiwaangelin ah ama kuma xidho nooc kasta oo qandaraasyo ah. Intaa waxaa dheer, waxay ku faanaan inaysan haysan nooc kale oo ujro qarsoon ah sida oggolaanshaha, bayaanka, soo celinta, u hoggaansanaanta PCI, kaarka ganacsiga, iwm.
Taasi waxay tidhi sababtoo ah Square waxay bixisaa labadaba shakhsi ahaan iyo macaamil online ah, iyo sidoo kale sifooyinka kale ee ganacsiga, waxaa jira kharashyo badan oo la xidhiidha isticmaalkooda:
Noocyada lacag-bixinta ee soo socda waxay keenayaan a 2.9% + $ 0.30 lacag macaamil:
API-yada khadka tooska ah
Kaarka Ecommerce ee lacagaha faylka.
Noocyada lacag-bixinnadan waxay yeelan doonaan a 3.5% + $ 0.15 lacag macaamil:
Kaarka macaamil ganacsi ee faylka.
Kaararka kreditka ee gacanta lagu geliyey qalab jidheed.
POS API lacag-bixinaha furaha ah
Kaadhka deynta ee gacanta lagu galay onlayn.
Iyo, sida aan kor ku soo sheegnay, Square kuma dalaco ujrada dib u celinta, oo ah naadir iyo aad u soo jiidasho leh. Ku darida taas, Square waxay siisaa macaamiisha Ilaalinta Dib-u-celinta ilaa $250 bishii ee macaamilka u qalmidda. Tani waxay kaliya ku socotaa inay ku tusto inta Square ay danayso macaamiishooda iyo ganacsigooda.
Sicir Bararka Dheeraadka ah
Maskaxda ku hay Square waxay siisaa milkiilayaasha mareegaha fursad ay ku abuuraan dukaanka Weebly ama Bakhaar Online ah oo Square ah. Laakin haddii ay taasi tahay dariiqa aad rabto inaad marto, waa inaad bixisaa lacag dheeraad ah.
Si loo dhiso dukaanka e-ganacsiga iyadoo la adeegsanayo goobta Weebly, Square waxay leedahay qorshooyin ka bilaabma $8/bishii. Tani waxay noqon kartaa mid aad qaali u ah marka dukaankaaga internetka uu balaadho oo aad aragto inaad u baahan tahay shaqeyn dheeraad ah.
Oo haddii aad rabto inaad abuurto Bakhaar Khadka Tooska ah, waxaad samayn kartaa bakhaar bilaash ah, ama waxaad geli kartaa qorshooyin qaali ah oo u dhexeeya $12-$72/bishii astaamo ay ka mid yihiin:
Gawaarida wax iibsiga.
SSL bilaash ah.
Magaca domainka gaarka ah.
Xirmay emayllada gaariga.
raritaanka waqtiga-dhabta ah.
Stripe vs Square: Noocyada lacag bixinta ee la aqbalay
Stripe waxay ka dhigtaa wax fudud si ganacsiyada adeegsada Stripe aysan ula macaamilin xisaabaadka baayacmushtarka. Waa kuwan noocyada lacagaha aad ka aqbali karto dukaankaaga onlaynka ah ee Stripe:
Kaararka caalamiga ah.
ACG toos ah debit iyo credit (muuqaal Square ma laha).
Stripe waxa kale oo ay aqbashaa Bitcoin, taas oo ku tusinaysa in Stripe aanu ka baqayn in uu sahamiyo aagag cusub oo uu ku lug yeesho tignoolajiyada gees ka gees ah. Xitaa waxaad ku abuuri kartaa badhanka deeqda Bitcoin adigoo isticmaalaya Stripe adiga oo raacaya sacab muggeed oo tillaabooyin fudud ah.
Intaa waxaa dheer, Stripe waxay aqbashaa boorsooyinka sida Masterpass ee Mastercard iyo Visa Checkout (kuwa kale). Waa maxay tan ku weyn waa xaqiiqda ah in Visa iyo MasterCard ay qaataan 80.1% cajiib ah shabakada kaararka.
Suuqa saamiyada kaararka deynta (Isha sawirka: WalletHub)
Stripe waxa kale oo ay taageertaa in ka badan 135 lacagood oo kala duwan, marka gaadhista saldhig macaamiil caalami ah weligeed dhib ma noqon doonto. Dhibka kaliya ee isticmaalka Stripe ayaa ah in aysan jirin hadda dariiq aad ku aqbasho lacag-bixinta shaqsi ahaan.
Isbarbardhigga Stripe vs Square wuxuu noqday mid sii kordheysa oo muhiim ah sannadihii la soo dhaafay iyadoo Square ay ballaarisay adeegyadeeda si ay u daboosho baahiyaha shirkadaha doonaya inay ganacsi shaqsi ah sameeyaan. iyo khadka tooska ah.
Labajibbaaran waxay ku shaqeeyaan dhammaan kaararka deynta ee khadka tooska ah:
Waxaa dheer, waxay aqbali doontaa Apple Pay, Android Pay, iyo lacagaha eWallet. Hal shay oo Square ay siiso macaamiisha, oo Stripe aanu bixin, waa qalabka hubinta. Qaybta ugu fiicanna waa, akhriyaha kaadhka iyo POS ee aqbalida lacagaha mobilada ee shaqsi ahaan waa 100% free.
Stripe vs Square: Tayada Adeegga Macmiilka
Taageerada macmiilka Stripe
Stripe had iyo jeer ma lahayn sumcadda ugu wanaagsan marka ay timaado taageerada macaamiisha. Dhab ahaantii, ka hor 2018, ma jirin si ay macaamiisha Stripe u helaan taageerada wakhtiga dhabta ah.
Si taas loo xalliyo, Stripe ayaa shaaca ka qaaday 2018 in dhammaan macaamiisha Stripe ay hadda heli doonaan 24/7 wada sheekeysi toos ah iyo taageero taleefan si ay u buuxiyaan taageerada iimaylka ee jira ee la bixiyo saacadaha shaqada (Isniin-Jimcaha 9 subaxnimo-5 galabnimo). Haddii aad rabto inaad la xiriirto isticmaalayaasha Stripe, waxaa jira golaha Freenode (#xariif).
Hadda waa ammaan in la yiraahdo Stripe wuu ka sarreeyaa marka ay timaado taageerada macaamiisha, gaar ahaan marka uu ka soo horjeedo heerka taageerada ee Square. Tanina waa ka hor intaadan ogaanin in marka lagu daro dukumeenti ballaaran, Stripe ay leedahay xarun taageero oo ay ka buuxaan maqaallo iyo fiidiyowyo ka jawaabaya su'aalahaaga taageerada gubanaya:
Xarunta taageerada xarig
Hal shay oo laga yaabo inay dadka qaar damiyaan ayaa ah xaqiiqda ah in Stripe sidoo kale ay bixiso taageero qaali ah oo ka bilaabma $1000/bishii, taas oo u fiican ganacsiyada waaweyn ee farsameeya lacag-bixinno badan, oo aan aad ugu fiicnayn ganacsiyada yaryar ee leh miisaaniyad xaddidan.
In kasta oo laga yaabo in aanay caddaalad ugu muuqan kuwa aan awoodin $1000/bishii, haddana waxaan dareemaynaa Stripe in ka badan in ka badan oo ay ku sameeyaan 24/7 sheekadooda tooska ah iyo taageerada taleefanka ee qof kastaa heli karo.
Taageerada Macmiilka Square
Square hadda waxay siisaa ikhtiyaarka taageerada soo socda ee macaamiisha:
Taageerada telefoonka iyo iimaylka.
Wadahadal toos ah.
Taageerada Twitter ka go'an: @SqSupport.
Waxa kale oo aad geli kartaa Madasha Bulshooyinka Square adoo ka raadinaysa su'aalaha ama ereyada muhiimka ah iyo la xidhidhiyaha isticmaalayaasha kale ee Square:
forum bulshooyinka Square
In kasta oo ay u ekaan karto mid ku weyn dusha sare, waxaa xusid mudan in adeegga macaamiisha Square aanu had iyo jeer ahayn kan ugu fiican. Dad badan ayaa ka cawday xisaabaadkoodii la xayiray ama la joojiyay sabab la'aan. Waxayna kaaga sii daran tahay, markay tani dhacdo, Square si toos ah ayuu u jarayaa taageerada taleefankaaga wuxuuna kula xiriiri doonaa kaliya iimaylka, taasoo adkeyneysa in arrinta la xalliyo.
Taas awgeed, in kastoo, Square uu bixiyaa kanaalo taageero la mid ah sida Stripe (wada sheekaysi toos ah, telefoon, iimayl, iyo xataa golayaasha bulshada), kuma eka tayada ay Stripe si adag uga shaqeysay in la dhiso sannadihii la soo dhaafay.
Stripe vs Square: Documentation
Stripe waxa ay leedahay dukumeenti saaxiibtinimo aad u horumarsan iyo horumariye-saaxiibtinimo, micnaha si aad wax badan uga gudubto, waxaad u baahan doontaa xoogaa kood ah, horumarin, ama xirfado farsamo.
Ma doonaysaa inaad ka dhigto dukaankaaga ecommerce ka dhaqso badan tartankaaga? Waxaan bixinaa taageero heer caalami ah oo la heli karo 24/7 iyo adeegayaal aad u dheereeya. Eeg qorshayaashayada!
Dukumeenti xariif ah
Taasi maaha in la yiraahdo ma faa'iido. Laakin haddii aanad kooxdaada ku lahayn horumariye (halkan waa meesha aad ka kiraysan karto horumariyaha WordPress), waxay u badan tahay inaad la kulanto wax kugu adag inaad fahanto.
Dhanka kale, Square wuxuu ku dhegan yahay halku-dhigga in wax walba ay noqdaan kuwo fudud oo la fahmi karo dadka dhammaan heerarka xirfadaha. Waxay leeyihiin qaybta Hagaha Square oo leh waraaqo kaa caawinaya inaad bilowdo.
Haddii aad tahay horumariye, had iyo jeer waxaa jira Docs-ka Soo-saare, Blog-ga Soo-saare, iyo kanaalka Slack ee horumariyeyaasha (akhri: Sida loo isticmaalo Slack).
Isku soo wada duuboo, Square ayaa taageero u ah kuwa hadda bilaabaya iyo kuwa ka hormarsan, halka Stripe uu inta badan ku dheggan yahay dukumeenti horumarsan oo dadka ka caawiya inay si buuxda u abuuraan khibrado hubineed oo la beddeli karo shabakadooda.
Stripe vs Square: Isku-dhafka Ecommerce
Labada Stripe iyo Square labaduba waxay leeyihiin isku-xirnaanta ecommerce-ka oo la shaqeysa aaladaha ecommerce-ka caanka ah. Waxay sidoo kale leeyihiin API furan iyo qalabka horumariyaha, in kasta oo Stripe's uu aad u horumarsan yahay, oo leh astaamo badan, oo ay ku jiraan agabka lagu dhisayo hubinta la beddeli karo oo dhammaystiran.
Laakiin taasi waa meesha isku ekaanshaha u janjeero inuu joogsado.
Stripe waa mid aad u kala duwan, inkastoo uusan lahayn astaamo la mid ah Square. Tusaale ahaan, waxa ay la midaysaa daraasiin gaadhi-guud oo ay ku jiraan Easy Digital Downloads, Ecwid, iyo X-Cart. Waxa kale oo ay la shaqeysaa goobo kala duwan oo ecommerce ah sida Squarespace, Shopify, iyo Shopify beddelka sida WooCommerce.
Maaddaama Stripe loo qaabeeyey iyadoo maskaxda lagu hayo iibiyeyaasha khadka, waxay ku xidhi kartaa ku dhawaad ​​nooc kasta oo degel ah, goob wax lagu iibiyo onlaynka ah, ama goobta ganacsiga ecommerce. Iyo in ka badan 98 apps si kor loogu qaado habka lacag bixinta, kaliya Stripe ayaad si dhab ah u awoodi doontaa inaad cabbirto dukaankaaga khadka ah.
Stripe iyo WordPress/WooCommerce
Stripe ma laha plugin rasmi ah oo WordPress ah ama is dhexgalka. Laakiin waxaa jira horumariyayaal badan oo plugin ah oo ka dhex jira bulshada WordPress kuwaas oo ka dhigay isku dhafka Stripe ee goobta WordPress.
Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha caadiga ah ee loo dejiyo Stripe ee WordPress:
Sida bog lacag-bixineed hal-mar ah oo ku yaal bogga aasaasiga ah ee WordPress oo aan lahayn shaqada ecommerce.
Isticmaalka plugin foom ah sida foomamka culeyska si loo ururiyo lacag-bixinaha, dhigaalka, ama deeqaha.
Bilaash goobtaada WooCommerce.
Iyadoo Easy Digital Downloads, oo ah goob caan ah oo loogu talagalay kuwa iibinaya alaabada dhijitaalka ah.
Square waa albaabka kaliya ee lacag bixinta leh sifo dukaanka tooska ah ee bilaashka ah kaas oo si toos ah ugu xidha lacagaha labajibbaaran. Sidoo kale waa ikhtiyaarka kaliya ee ku shuraakoobaya meheradda ecommerce (Weebly) oo ay ku bixiso lacagaha labajibbaaran ee madal ay dadku isticmaalaan.
Square waxaa loola jeedaa inay noqoto xal omnichannel ah oo ay ku jiraan shaqeynta ecommerce. In kasta oo aadan wax badan ka beddeli karin inta uu Stripe oggol yahay, Square waa labadaba saaxiibtinimo ku filan qof kasta si uu u isticmaalo oo horumariyo ku filan oo horumariyayaasha ama shirkadaha waaweyn ay sidoo kale ka faa'iidaysan karaan.
Square wuxuu la mideeyaa Wix, Weebly, Ecwid, BigCommerce, iyo 3dcart kuwa hadda bilaabaya. Iyo kuwa u baahan wax badan, Square wuxuu si fiican ula shaqeeyaa Drupal, WooCommerce, Magento, iyo mareegaha gaarka loo leeyahay.
Square iyo WordPress/WooCommerce
Square waxa ay ku faantaa is dhexgalka fudud ee degelkaaga WordPress.com ee jira. Si aad u bilowdo, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad lahaato qorshe ganacsi oo qaali ah WordPress.comlaga bilaabo $25/bishii) oo u isticmaal wax kasta oo ka mid ah plugins ecommerce-ka ay taageerto WordPress sida WooCommerce ama WP EasyCart.
Haddii aad leedahay degel WordPress.org ah oo is-martigeliyay, waxa kale oo aad ku dari kartaa Square dukaanka online-ka ah, sida aad u samayn lahayd Stripe. Tusaale ahaan, WooCommerce Square waxay ku siin doontaa habka ugu fiican ee aad isku waafajin karto alaabada iyo xogta alaabta ee u dhaxaysa WooCommerce iyo Square POS.
Dhammaadka, haddii aad tahay iibiyaha kanaalka badan, Square ayaa guulaysta. Haddii aad tahay ganacsi online-kaliya ah, Stripe wuu guuleystaa sababtoo ah waxay aqbashaa noocyo lacag-bixineed oo badan waxayna taageertaa lacago badan.
Stripe vs Square: Faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Daah-furnaan, qiime fidsan, iyo qiimo tartan.
Miisaanka caalamiga ah iyo gaadhista.
Ma jiro qandaraasyo bille ah.
Xalka hubinta oo dhammaystiran oo la beddeli karo.
Macaamiisha waligood kama tagin goobtaada si ay u dhamaystiraan iibka.
Kanaallo taageero oo badan, qaar baa la heli karaa 24/7.
U hoggaansanaanta PCI buuxda.
Qaar badan ayaa ka cawda waqtiyada jawaabta iimaylka oo gaabis ah iyo arrimaha taageerada macaamiisha kale.
Lacag celinta ma xallin Stripe waxayna ku kacaysaa lacag haddii aad lumiso khilaafka.
Qalooca waxbarasho qotodheer oo loogu talagalay kuwa aqoonta farsamada xaddidan.
Aan ku habboonayn ganacsiyada khatarta sare leh.
Aad user-saaxiibtinimo gaar ahaan.
Ku fiican kuwa raadinaya xal lacag bixinta omnichannel.
Ku habboon ganacsatada mugga yar.
Qiime aad u tartan badan, oo ay ku jirto Ilaalinta Lacag-bixinta.
Xalalka ecommerce-ka gaarka ah.
Cabasho badan oo ku saabsan xisaabaadka la joojiyay ogeysiis la'aan.
Sifooyin la'aan, gaar ahaan aaladaha is-diiwaangelinta.
Qiimaha shirkadaha waaweyn ee samaynaya ganacsi badan.
Stripe vs Square, kee baa ka wanaagsan?
Sababtoo ah albaabada lacag bixinta ayaa aad isku mid ah ilaa aanay ahayn, way adagtahay in lagu dhawaaqo guuleyste cad marka ay timaado Stripe vs Square:
Haddii aad u baahan tahay dabacsanaan si aad online iyo qof ahaan ugu iibiso, Square ayaa ku guulaysta si fog iyadoo leh astaamo omnichannel ah.
Haddii aad u baahan tahay xal online ah oo si adag u cabbiri kara adduunka oo dhan ama qaansheeg/xallin ururin lacag-bixineed oo keli ah, Stripe ayaa helaya booska koowaad.
Stripe vs Square, waa maxay ikhtiyaarka lacag bixinta ee ay tahay inaad isticmaasho? Waxaan si dhow u eegnay sifooyinkooda muhiimka ah, kharashaadka, dukumeentiyada, iyo in ka badan. Guulaystaha waa… 💵🤝Riix halkan Tweet
Doorashada albaabka saxda ah ee lacag bixinta maaha doorasho sahlan. Iyo Stripe vs Square oo ah wicitaan sidan u dhow, waxay hoos ugu soo degi doontaa astaamo shaqsiyeed si ay kaaga caawiyaan inaad gaarto go'aanka ugu dambeeya.
Haddii aad ku cusub tahay socodsiinta dukaanka khadka ah oo aad leedahay aqoon farsamo oo xaddidan, Square ayaa noqon doonta doorashada ugu fiican. Waxaa lagu qiimeeyaa si tartame ah marka la barbar dhigo Stripe oo ay la timaado hab habayn fudud iyo dukumeenti saaxiibtinimo bilow ah si ay kuu hagto.
Si kastaba ha ahaatee, kuwa raadinaya habka hubinta ee gaarka loo leeyahay, Stripe ayaa noqon doonta dariiqa kuugu fiican. Haddii aad maamusho dukaanka ecommerce oo ku tiirsan mugga, waxaad u baahan doontaa sifo kasta oo aad ku balaadhiso ganacsigaaga oo aad hubiso iibka badan. Tani waxay ka dhigan tahay gaaritaanka caalamiga ah, helitaanka taageerada 24/7, iyo dabacsanaanta lagu daro albaabka lacag bixinta Stripe shabakad kasta ama madal aad si fudud ku doorato.
9 Siyaabood Oo Lagu Horumarin Karo Xayeysiiska Jiilka Hogaaminta LinkedIn Maanta
9 Koorsooyinka WordPress ee ugu Wanaagsan ee Bilowga ah